Tababaraha kooxda Blues Roberto Di Matteo ayaa loo sheegay inuu ugu yraan la soo wareegi karo labo ciyaaryahan kale oo waa weyn, iyadoo lacagta ay kooxda xagaagan suuqa gelineyso la filayo inay dhaafto 100 milyan ginni. Waxa ay haatan 66 milyan ginni ku qarashgareeyeen Eden iyo Thorgan Hazard, Oscar iyo Marko Marin. (The Sun)
Weeraryahanka Napoli Edinson Cavani oo lagu qiimeeyo £32m, ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee Wigan Victor Moses oo lagu qiimeeyo £8m iyo daafaca Marseille Cesar Azpilicueta ayayna u badan tahay inay diirada u saran tahay kooxda Chelsea. (Daily Express)
Tababaraha kooxda Manchester City Roberto Mancini ayaa 13 milyan ginni ku dalbaday daafaca Liverpool Daniel Agger, iyadoo sidoo kale ay ciyaaryahanka reer Denmark xiiseynayaan kooxaha Barcelona iyo Real Madrid. (Daily Mirror)
Spurs ayaa dib u soo cusbooneysiisay xiisaha ay u hayaan daafaca kooxda Real Madrid Ricardo Carvalho, ka dib markii daafacii hore ee Chelsea loo sheegay inuu ka tagi karo Bernabeu. (The Times)
AC Milan ayaa kula dagaalami doonta kooxda Gunners saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Real Madrid Nuri Sahin. (The Times)
Kooxda Paris St Germain ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee FC Porto Joao Moutinho, kaasoo uu doonayo macalinka Tottenham Andre Villas-Boas. (The Times)
Kolo Toure ayaa si lama filaan ah diirada ugu soo koray kooxda Barcelona. Kooxda ka dhisan La Liga ayaa isku dayaysa hadii ay lacag jaban ku helin karaan daafaca reer Ivory Coast. (Daily Mirror).
Kooxda Sunderland ayaa 12 milyan ginni ku dalbatay weeraryahanka kooxda Wolves Steven Fletcher, lakiin Wolves ayaa ku dooneysa ciyaaryahanka 15 milyan ginni (Daily Mail)
Kooxda Manchester United ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo daafaca bidix ee kooxda Chelsea Ashley Cole, ka dib markii laga soo diiday dalabkooda 12ka milyan ginni ee ay ku doonayeen ciyaaryahanka kooxda Everton Leighton Baines. (Metro)
Kooxda Arsenal ayaa isku dayaysa mar kale ka dalbadaan kooxda Southampton daafacooda garabka ah ee 17 jirka Luke Shaw. (Daily Mirror)
Ciyaaryahanada Alberto Aquilani iyo Brad Jones ayaa laga diri doonaa kooxda si dhaqaale loogu helo lacag lagu soo iibiyo ciyaaryahano kale, lakiin mushaharka Aquilani oo gaaraya sannadkii 6.5 milyan ginni ayaa adkeyneysa inay kooxna iibsato. (Daily Mail)
Kooxda Juventus ayaa dooneysa inay la soo wareegto 20 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Atlanta Gabbiadini, kaasoo la filayo inay maanta soo gabagabeeyaan heshiiskiisa, lakiin waxaa markaasi ka dib ay amaah ku siin doonaan ciyaaryahanka ku jira xulka Italy ee Under 21 kooxda Bologna. (Corriere dello Sport)
Kooxda AC Milan oo suuqa ugu jirta daafac ayaa ceyrsaneysa daafaca reer Cameroon ee kooxda Marseille 22 jirka Nicolas N’Koulou. Ka dib markii kooxda ay ka tageen daafacyo udub dhexaad u ahaa sida Thiago Silva iyo Alessandro Nesta. (Corriere dello Sport)
Kooxda Inter Milan ayaa ku dhow inay la soo wareegto ciyaaryahanka reer Ghana ee kooxda Marseille Andre Ayew, ka dib markii Marseille ay bedelkiisa u keensatay Evian Sagbo. (Goal)
Milkiilaha kooxda Palermo Zambarini ayaa xaqiijiyay in xiddiga kooxda Palermo iyo dalka Talyaaniga Balzaretti inuu ku sii jeedo oo uu ku biirayo kooxda ka dhisan caasimada Talyaaniga ee AS Roma. (Corriere dello Sport)
Zambirini ayaa sidoo kale sheegay in kooxda heysta horyaalka Serie A ee Juventus ay iyadana xiiseyneyso ciyaaryahana Balzaretti. (Tuttosport)
Kooxda Juventus oo dhawaan ka baxday dalabka weeraryahanka Arsenal Robin van Persie ayaa dooneysa inay xooga saarto inay soo xerogeliso weeraryahanka ka dhacay Manchester City Edin Dzeko, waxaana sidoo kale doonayaan inay la soo wareegaan daafaca kooxda Rubin Kazan ee u dhashay dalka Talyaaniga Bocchetti. (Tuttosport)
Kooxda Inter Milan ayaa weli rajo xoogan ka qabta inay soo xerogeliso kubadsameeyaha reer Brazil Lucas Moura ka dib markii Man United ay ku guuldareysatay inay ciyaaryahanka soo xerogeliso. (Tuttosport)
Kooxda AC Milan ayaa saraakiil ka socota waxa ay ku sugan yihiin dalka Faransiiska halkaasoo ay ka raadinayaan daafac cusub, iyadoo diirada uu u saran yahay kabtanka iyo daafaca kooxda heysata horyaalka Ligue 1 Monteplier Yanga-Mbiwa. (Tuttosport)
Kooxda Inter Milan ayaa dooneysa weeraryahanka kooxda Cagliari Mauricio Pinilla, iyagoo raadinaya ciyaaryahan bedel u noqda Diego Milito, madaama la filayo in Pazinni uu ka tago kooxda xagaagan, lakiin waxaa Inter horistaagi kara lacagta ay ku dooneyso Cagliari ciyaaryahanka oo gaareysa 18 milyan euro. (Corriere dello Sport)
Wakiilka ciyaaryahanka kooxda Inter Milan Ricky Alvarez ayaa meesha ka saaray in ciyaaryahanka uu wakiilka u yahay inuu xagaagan ka tagayo San Siro oo uu u dhaqaaqayo kooxda Catania. (Itasportpress).
Wakiilka ciyaaryahanka reer Poland Robert Lewandowski ayaa beeniyay inay wadahadalo la galeen kooxda Juventus, isagoo sheegay inaysan wax xiriir ah ka helin kooxda heysata horyaalka Serie A. (Football Italia)
Tababaraha kooxda Dinamo Zagreb ee dalka Croatia ayaa u sheegay wargeyska Sportske in Luka Modric loo texgelin karo ciyaaryahan Real Madrid ah, isagoo sheegtay in labada kooxood ay ka heshiiyeen saxiixa ciyaaryahanka reer Croatia. (Marca)
Daafaca midix ee dalka Brazil iyo kooxda Palmeires Alexander dos Santos Mendonça, ‘Cicinho’ ayaa qarka u saran inuu si rasmi ah ugu biiro kooxda Sevilla ee ka dhisan La Liga, sida uu xaqiijiyay wakiilka ciyaaryahanka. (Marca)
Kooxda Real Zaragoza ayaa soo gabagabeysay heshiiskii ay kula soo wareegeyso weeraryahanka kooxda Recreativo Javi Alamo, ka dib markii heshiis ku aadan 23 jirkaan uu dhexmaray labada kooxood. (Marca)